को हुन् त सिबीआइले आरोपी बनाएका राजिव कुमार? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारको हुन् त सिबीआइले आरोपी बनाएका राजिव कुमार?
राजिव कुमारलाई आरोप छ, उनले एसआईटीमा रहँदै आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका छन्। एसआईटीका अध्यक्ष हुँदा राजिव कुमारले जम्मू-कश्मीरमा शारदा प्रमुख सुदिप्त सेन र उनका सहयोगी देवयानीलाई पक्राउ गरेका थिए। उनीहरूबाट पाइएको डाइरी राजिव कुमारले लुकाएका छन्। किन भने डायरीमा ती तृणमूल काङ्ग्रेस नेताहरूको नाम छ, जसले चिटफण्ड कम्पनीबाट पैसा लिएका थिए। त्यो डाइरीको खोजीमा छ सिबीआइ। डाइरीमा नै छ तृणमूल काङ्ग्रेस नेताहरूको भविष्य पनि। ती नेताहरूको नाम सार्वजनिक हुने वित्तिकै तृणमूलको सरकार ढल्छ। यो कुराले ममता व्यानर्जी अत्याधिक डराएकी छन्। त्यसैले हो उनी धर्नामा बसेकी छन्। व्यानर्जीले सिबीआईले केन्द्रको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएकी छन्।
कलकत्ता,4फरवरी
हजारौं करोड़ रुपियाँको शारदा चिटफण्ड घोटालामा आरोपित कोलकाताका पुलिस कमिश्नर राजिव कुमारलाई सोधखोज गर्न हिजो सिबीआइको टोली उनको घर गएको थियो। यसैको विरुद्धमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी धर्नामा बसिन्।
राजिव कुमार पश्चिम बङ्गालको 1989 व्याचका आईपीएस अधिकारी हुन्। उनी अहिले कोलकाता पुलिस आयुक्त छन्।
कुमार ममता व्यानर्जीको नजिकका मानिन्छ। उनलाई 2016 मा सुरजित कर पुरकायस्थको ठाउँमा कोलकाता पुलिस आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। जसलाई सीआईडी विभागमा प्रमोट गरियो। कुमार यसअघि कोलकाता पुलिस आयुक्त, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय र विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख पनि बनिसकेका छन्।
त्यो डाइरीको खोजीमा छ सिबीआइ। डाइरीमा नै छ तृणमूल काङ्ग्रेस नेताहरूको भविष्य पनि। ती नेताहरूको नाम सार्वजनिक हुने वित्तिकै तृणमूलको सरकार ढल्छ। यो कुराले ममता व्यानर्जी अत्याधिक डराएकी छन्। त्यसैले हो उनी धर्नामा बसेकी छन्। व्यानर्जीले सिबीआईले केन्द्रको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएकी छन्।